Iyo Steve Jobs Theatre ichagamuchira Kurume 1 musangano wevashandi vegore negore | IPhone nhau
Iyo Steve Jobs Theatre ichaita musangano wepagore wevashandi paMarch 1
Apple yakazivisa vhiki ino musi uchaitwa musangano pakati pevachagovana vakuru nevatungamiriri vekambani. Ino nguva zuva rakasarudzwa ndere inotevera Kurume 1, 2019 na9: 00 ndiri pacific nguva.
Iyo nzvimbo yakasarudzwa haigone kuve imwe kunze kwe iyo Steve Jobs Theatre mukati meApple Park pachayo uye zvinotarisirwa kuti nyaya dzakakosha senge kukosha kwemasheya ekambani kana kosi yavanofanira kuteedzera kukurira mamiriro ezvinhu avari kuApple izvozvi achauya.
Iyi ndeimwe yenyaya idzo dzinouya gore gore kubva musangano uyu waitika gore rega, asi panguva ino maziso ese akatarisa kwariri sekukonana pakati pe varidzi vemasheya makuru kana vazhinji vagovana veApple nevatungamiriri vekambani. Haisi iyo yakaipa nyaya kune kambani yakaita seApple, kana, asi mheremhere yekudzikira kwekufungidzira uye kudzikira kwekutengesa kwema iPhone mhando vane chokwadi chekuve pakati pemibvunzo yevanogovana.
Kune vese vanogovana vanoda kuwana nzvimbo, vanofanirwa kuziva kuti nzvimbo dzakaganhurwa nekuda kwekugona kweSteve Jobs Theatre, saka avo vanoda kuwana vanofanirwa kukurumidza kunyoresa kuti vawane chiitiko pawebhu Proxyvote.com, kana yakanyoreswa kubva kuApple pachayo, vagovani vanogona kuiwana vachasarudzwa nehurongwa hwakasimba hwechikumbiro. Zviripachena kuti vamwe vevazhinji vagovana vachave pamberi, asi Kunyoresa kunovhura muna Kukadzi 6 kuwana uyu musangano wepagore wevashandi vekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo Steve Jobs Theatre ichaita musangano wepagore wevashandi paMarch 1
Apple kuratidza mapurisa eKorea nechirangaridzo chekutenda kurwisa zvigadzirwa zvekunyepedzera
Ikea kuvhura smart blinds uye machira neKeKKit munaFebruary